I-Spin 247 Casino yase Ningizimu Afrika: Ama Spin awu 100 wamahhala nemali engu bhonasi wamhhala
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-spin247 casino
Isibuyekezo se-Spin247 Casino
Ibhonasi Lokukwamukela:R3,000 Ibhonasi ne 100 ama-spins
100 Izikhathi Zokudlala Mahhala Ama-No Deposit Bonus
Maningi amakhasino ongawakhetha uma kukhulunywa ngamakhasino e-inthanethi abhekele abadlali abahlala eNingizimu Afrika. Kunenqwaba yamakhasino e-inthanethi anelayisense, alungile navikelekile anikela ngemidlalo esezingeni eliphakeme, amabhonasi azuzisayo nezici ezisezingeni eliphezulu. Namuhla, sizobheka ikhasino ye-inthanethi entsha emangalisayo – i-Spin247 Casino. Ingabe le khasino ikufanele? Sihlola yonke imininingwane kulesi sibuyekezo esingachemile, esijulile.
Uma siyibheka okokuqala, i-Spin247 Casino ibukeka ingenazo izinto eziningi. Ayinayo indikimba ethize. Inombala ongemuva ompunga futhi ibukeka ilula. Ngokungafani namakhasino e-inthanethi amaningi, i-Spin247 ayinamafuhlufuhlu futhi lokhu yinto enhle. Uma uthanda amakhasino anezindikimba zama-mascot, izithombe ezimibalabala nezinye izinto ezibukwayo, kungenzeka ukuthi i-Spin247 ayikufaneli.
I-Spin247 Casino iphethwe futhi ngeye-Fairdos Online Services Limited, ebhaliswe e-Achilleos, e-Curacao. Ikhasino inelayisense kaHulumeni wase-Curacao ngakho-ke iyibhizinisi eliku-inthanethi elisemthethweni elisebenza ngendlela esemthethweni.
I-Spin247 Casino iyaziwa ngokuphana kwayo kubo bobabili abadlali abasha nabakhona, inamaphromoshini nemivuzo eminingi abangayisebenzisa. Iqoqo labo lemidlalo nalo liyingqayizivele futhi linama-slot nama-jackpot adlaleka kalula kuselula futhi akhethekile. Ngakho-ke, ngeke uzithole lezi zihloko zemidlalo kwamanye amakhasino e-inthanethi, okusho ukuthi leli qoqo likhethekile.
Spin247 Casino Ningizimu Afrika
I-Spin247 Casino iyabamukela abadlali abavela kuwo wonke umhlaba, kodwa kuyabonakala ukuthi iyabamukela abadlali abavela eNingizimu Afrika. Le khasino ifanele izidingo zabo ngezindlela ezingaphezu kweyodwa. Kusuka ekubhalisweni kuya kunqubo yokubhenka, kukhona okunye okwenziwe ngendlela ethile ukwenza isipiliyoni sibe lula futhi sibe sihle kubadlali baseNingizimu Afrika.
Okokuqala, amaRandi aseNingizimu Afrika ayasebenza kule khasino futhi uthola yonke imininingwane yamaphromoshini kanye namabhonasi okukwamukela ngamaRand aseNingizimu Afrika. Awudingi ukuthi uhlale bese ushintshe imali futhi.
Lapho uzama ukubhalisa kule khasino ye-inthanethi, kuzodingeka ukuthi ubhale imininingwane yakho kufomu lokubhalisa futhi uzobona ukuthi iNingizimu Afrika isivele ikhethiwe ku “country field”.
I-EasyEFT iyisevisi ethize yaseNingizimu Afrika enamanani aphansi okuhwebelana nokucubungula, kulula ukuyisebenzisa futhi ayinakhadi lesikweleti. I-EasyEFT inikeza izindlela ezilula kubathengi baseNingizimu Afrika abaku-inthanethi zokuthenga izimpahla namasevisi ezitolo ze-ecommerce ngokushesha nangokuphepha. Ihlangana nawo wonke amabhange amakhulu aseNingizimu Afrika anjenge-FNB, i-Standard Bank, njll.
Ngaphezu kwalokho, inikezela ngezindlela ezithile zaseNingizimu Afrika zokubhenka ezibandakanya amakhadi esikweleti, ama-eWallet kanye nokudlulisa imali ngebhange. Enye yezinzuzo ezinkulu kubadlali baseNingizimu Afrika yiqiniso lokuthi i-Spin247 iyayisekela indlela yokubhenka ye-EasyEFT.
Amakhodi Amabhonasi Okukwamukela e-Spin247 Casino
Uma usanda kubhalisela i-akhawunti entsha e-Spin247 casino, unezikhathi ezijabulisayo ezizayo. I-Spin247 casino ikhipha ukhaphethi obomvu ukwamukela abadlali abasha ngebhonasi yokukwamukela enenzuzo esatshalaliswa kumadiphozithi amahlanu okuqala owenzayo.
Ngokuqhubeka kwamadiphozithi akho amahlanu okuqala, ungakwazi ukwenza u-R3500 mahhala. Ngokwengeziwe, uthola ama-spin amahhala angu-100 akhokhwa ngesilinganiso sama-spin amahhala ayishumi ngosuku izinsuku eziyishumi zilandelana kusukela ngosuku lediphozithi yakho yokuqala.
Ibhonasi elingana nediphozithi yehlukaniswe phakathi kwamadiphozithi akho amahlanu okuqala ngokulandelayo-
Idiphozithi Yokuqala – Ibhonasi elinganayo ka-200% ize ifike ku-R500
Idiphozithi Yesibili – Ibhonasi elinganayo ka-100% ize ifike ku-R600
Idiphozithi Yesithathu – Ibhonasi elinganayo ka-50% ize ifike ku-R600 Idiphozithi Yesine – Ibhonasi elinganayo ka-50% ize ifike ku-R800
Idiphozithi Yesihlanu – Ibhonasi elinganayo ka-50% ize ifike ku-R1000
Kunemigomo nemibandela ethize yebhonasi yokukwamukela. Amaphuzu ambalwa abalulekile okufanele uwaqaphele maqondana nephakheji yokukwamukela yilawa: –
Kudingeka idiphozithi eqala ku-R50 ukuze ufanele ibhonasi yokukwamukela.
Ibhonasi yokukwamukela namanye amabhonasi ajwayelekile anesidingo sokubheja ukuze ukhiphe imali esingu-40x ngaphandle uma kuchazwe ngenye indlela.
Awudingi ukusebenzisa noma iyiphi ikhodi yekhuphoni ukuze uzuze ibhonasi elinganayo, wenza nje idiphozithi yakho bese ifakwa ngokuzenzakalela ku-akhawunti yakho kungakapheli imizuzu engu-10.
Qiniseka ukuthi usebenzisa ama-spin amahhala kungakapheli amahora angu-24 kusuka ngesikhathi akhishwa ngaso usuku ngalunye. Ngaphandle kwalokho, ama-spin amahhala azophelelwa yisikhathi.
Spin247 Casino Ikhodi Yebhonasi Yediphozithi Engekho
Ibhonasi yokukwamukela eshiwo ngenhla iyisikhuthazo kuwe sokudiphozitha imali yangempela. Kodwa-ke, abadlali abaningi abasha banovalo lokutshala imali yabo abayisebenzele kanzima ekhasino ye-inthanethi entsha. I-Spin247 Casino inikeza isixazululo esifanele kubadlali abanjalo ngebhonasi yediphozithi engekho.
Njengoba igama liphakamisa, le bhonasi uyinikwa mahhala ngokuphelele ngokubhalisa ekhasino. Uma ubhalisa ne-Spin247, uzothola ama-spin amahhala angu-100 njengebhonasi yediphozithi engekho.
Lawa ma-spin amahhala ayindlela enhle ukuhlola i-Spin247 Casino, ukuzama imidlalo, futhi uzuze nemali yangempela ngaphandle kokubeka ipeni elilodwa lemali yakho engcupheni. Lapho usuthanda isipiliyoni, ungaqhubeka bese udiphozitha imali yangempela.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Spin247 Casino
Njengoba usanda kufunda, abadlali abasha bathola ukwamukelwa ngemfudumalo ngebhonasi yediphozithi engekho nebhonasi elinginayo kumadiphozithi amahlanu okuqala. Kepha, kuthiwani ngemuva kokwenza idiphozithi yakho yesihlanu? Ungakhathazeki, amaphromoshini awapheli e-Spin247 casino.
Noma ngabe ubudlala e-Spin247 casino isikhathi eside futhi ungasabhekwa njengomdlali omusha, kunamaphromoshini amaningi ajwayelekile nezinhlelo zokuvuza ozosizakala ngazo.
Njengoba i-Spin247 iyikhasino ye-inthanethi entsha sha evuselela amaphromoshini awo njalo, siphakamisa ukuthi ubhalisele iphephandaba ye-imeyili yayo ukuze uhlale unolwazi. Ngale ndlela, ngaso sonke isikhathi lapho kumenyezelwa iphromoshini entsha noma ibhonasi, uzokwaziswa futhi awusoze waphuthelwa elinye ithuba elinenzuzo.
Nawa amanye amabhonasi akhona njengamanje e-Spin247 casino.
Ibhonasi Yokumema Umngane
Uma uchitha isikhathi esimnandi udlala e-Spin247 casino futhi ufuna ukwabelana ngobumnandi nabangane bakho, i-Spin247 casino izokukhokha ukwenza kanjalo. Ngenxa yebhonasi yokumema umngane, ukumema abangane bakho manje yisimo sokuwina kini nobabili.
Indlela esebenza ngayo ilula, vele unikeze ikhodi yakho yokudlulisela kubangane bese ubamema ukuthi bajoyine i-Spin247 casino. Lapho umngane wakho ebhalisa, kuzodingeka asebenzise ikhodi yokudlulisela ngesikhathi sokubhalisa. Lapho umngane wakho ebhalise ngempumelelo, uzothola ama-spin amahhala angu-100.
Akupheli lapho, uma umngane wakho enza idiphozithi yakhe yokuqala yemali yangempela, uzophinda uthole u-50% wenani lediphozi njengebhonasi eyengeziwe.
Ibhonasi Yomdlalo Wenyanga
I-Spin247 casino ikhetha umdlalo njalo ngenyanga eqoqweni layo ukuze udlale indima yomdlalo wenyanga. Le phromoshini igcina izinto zithakazelisa futhi iyindlela enhle yokuthi abadlali bazame imidlalo emisha njalo ngenyanga obekungenzeka ukuthi bangalitholi ithuba lokuyihlola.
Le midlalo iza nezinzuzo ezithize zalabo abayidlalayo. Umdlalo wenyanga uzoba namaphromoshini ahlukahlukene eyomenyezelwe futhi ungazuza kulawa maphromoshini inyanga yonke lapho udlala umdlalo okhethiwe.
Ngakho-ke, uma ungaqiniseki ukuthi umuphi umdlalo ozowudlala ngokulandelayo, kufanele ubheke umdlalo wenyanga.
Abadlali abajwayelekile benziwa ngokuzenzakalela amalungu ekilabhu yabadlali abathembekile ngokubona kwe-Spin247 casino. Amalungu ekilubhu athola izinzuzo ezinkulu ezibandakanya imivuzo yamasonto onke ethunyelwa ngqo ku-akhawunti yakho ye-Spin247, nesipho esimangazayo esikulindele kanye ngesonto. Dlala kaningi bese uhola okuningi.
Indlela Yokungena Ngemvume Nokubhalisa e-Spin247 Casino
I-Spin247 casino idinga ukuthi abadlali bavule i-akhawunti ukuze bakwazi ukudlala imidlalo, bathole amabhonasi nokuthi basebenzise zonke ezinye izici ezinikezwayo. Ukuvula i-akhawunti nokuthi ube yilungu lale khasino, kumele uqedele inqubo yokubhalisa engenziwa ngemizuzu embalwa.
Lapho usugcwalise ifomu lokubhalisa, uthola ama-spin amahhala angu-100 . Ukubhalisa, ulandela izinyathelo ngezansi.
Yiya kuwebhusayithi ye-Spin247 Casino nge-PC yakho noma ngesiphequluli sedivayisi yeselula
Chofoza ‘Join Now’ bese kuvela ifomu lokubhalisa elinezingxenye ezingu-4
Isigaba 1- Hlinzeka isayithi ngenombolo yakho yeselula bese ukhetha izwe ohlala kulo.
Isigaba 2 – Lapha yilapho udinga ukulungisa imininingwane ye-akhawunti, ungasetha igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi bese ufaka ikheli lakho le-imeyili.
Isigaba 3- Isigaba 3 siqondane nemininingwane yomuntu siqu lapho uzodinga khona ukuhlinzeka ngegama lakho, usuku lokuzalwa, nekhodi ye-pin.
Isigaba 4- Faka ikheli lakho ngokugcwele ngendlela eceliwe.
Thikha ibhokisi ukuqinisekisa ukuthi uneminyaka esemthethweni yokugembula.
Ngokuqhubeka nenqubo yokubhalisa, uyavumelana nemigomo nemibandela ye-Spin247 casino.
Chofoza inkinobho join now bese uthola ibhonasi.
Umqhafazo onekhodi uthunyelwa kunombolo yakho yeselula.
Faka ikhodi yokuqinisekisa ukuqedela inqubo yokuqinisekisa bese uvula i-akhawunti yakho entsha.
Imidlalo Yasekhasino Ye-inthanethi Ongayidlala e-Spin247 Casino
I-Spin247 Casino ineqoqo elikhethekile lemidlalo. Amakhasino amaningi e-inthanethi athola imidlalo yawo kubahlinzeki bemidlalo abavamile abanjenge-Microgaming, i-NetEnt, BetSoft, i-Evolution Gaming abanye abaningi. Ngakho-ke, kuvamile ukunaka ukuthi amakhasino amaningi e-inthanethi ahlinzeka ngemidlalo efanayo nohlobo olufanayo lwamaqoqo emidlalo.
Okuhlukile nokusha ngeqoqo lemidlalo lase-Spin247 casino wukuthi ikhasino inohlelo lwayo lokudala imidlalo lwe-Slot Factory, umhlinzeki wezici zemidlalo we-Intouch Games. Ngakho-ke, uma usuqedile ukudlala imidlalo efanayo kumakhasino e-inthanethi ahlukahlukene futhi ufuna ama-slot amasha nama-jackpot ayingqayizivele, i-Spin247 ikulindile.
Ama-slot enza iphathi ibe mnandi e-Spin247 casino. Eqoqweni layo lemidlalo, iningi lemidlalo ngama-slot evidiyo. Inakho konke ikhasino, imishini yokugembula yakudala ye-3 reel, ama-slot evidiyo e-5 reel, ama-slot anengqikithi, ama-slot omculo, ama-slot asabisayo nokuningi.
Kungase kube nama-slot angu-30+ kuphela, kepha i-spin ngayinye ikhethekile futhi ikhethwe ngokucophelela ukunika abadlali isikhathi esimnandi. Imidlalo ese-Spin247 casino inezinhlamvu ezithize nemidlalo yama-multiplier eyingqayizivele engengeza kulokhu okuwinile.
Amanye wama-slot athandwa kakhulu e-Spin 247 casino: –
Ngeshwa, imidlalo yasetafuleni nemidlalo yasekhasino ayitholakali e-Spin247 casino. Kubukeka sengathi le khasino inemidlalo ethize futhi leyo midlalo ngama-slot evidiyo. Uma udlala imidlalo yasetafuleni eminingi futhi ufuna eyehlukile, mhlawumbe uzofuna ukuqhubeka nokufuna ikhasino yakho ye-inthanethi efanelekile, ngoba i-Spin247 ayinakho okuningi ekunikezayo maqondana nemidlalo yasetafuleni neyasekhasino. Kodwa-ke, njengoba i-Spin247 casino isanda kuvulwa muva nje, kungaba neminye imidlalo yasetafuleni ezoyethulwa maduze. Bheka lapha ukuthola izibuyekezo. Inemidlalo emibili nje ngaphansi kwalesi sigaba –
Hi – Lo Poker
Ama-jackpot akhula njalo (progressive) e-Spin247 casino angama-slot. Ayikho imidlalo yasetafuleni enama-jackpot akhula njalo. Le midlalo ihlukaniswe ngaphansi kwe ‘Mega Jackpots’.
Ama-jackpot akhula njalo yimidlalo lapho inani le-jackpot lenyuka njalo isikhathi ngasinye umdlali ovela noma kuphi emhlabeni ebhejela lowo mdlalo. Inani liqhubeka landa ngale ndlela kuze kube yilapho umdlali oyedwa onenhlanhla eyiwina i-jackpot. Ngalolu hlobo lwe-jackpot lapho inani lingahleliwe, kungenzeka ukuthi i-jackpot ifinyelele ezigidini zamadola. Ngakho-ke, uma ufuna ukuwina okukhulu nokuzijabulisa, kufanele ngabe uchitha isikhathi esithe xaxa enqwabeni yama-jackpot akhula njalo.
Inani lemali le-jackpot litholakala ngaphansi kwesithonjana somdlalo ngamunye we-jackpot e-Spin247 casino. Amanye ama-jackpot akhula njalo athandwa kakhulu anenzuzo enkulu e-Spin247 casino yilawa: –
Ingabe i-Spin247 Casino Iyatholakala Yini Kuselula?
Yebo, i-Spin247 Casino iyikhasino ye-inthanethi yesimanje esungulwe ngo-2020 futhi bekungaba yihlazo uma ibingasebenzi kumadivayisi aphathekayo. Ungasebenzisa uhlu lwamadivayisi eselula ahlukahlukene ukudlala e-Spin247 casino. Ama-tablet nama-smartphone asebenza kahle e-Spin247 casino, noma ngabe iyiphi isofthiwe yokusebenza yedivayisi esebenzayo, kungaba yi-Android, i-iOS, i-Windows noma i-Blackberry.
Manje usunekhasino ephelele lapho ungadlala khona ngemali yangempela noma lapho ukhona nanoma yisiphi isikhathi. Ungakwazi ukuthwala ikhasino yeselula esikhwameni sakho. Kodwa-ke, ukuze uqiniseke ukuthi unesipiliyoni esihle sekhasino yeselula, naka izimfuneko ezilandelayo: –
I-smartphone noma ithebhulethi yakho idinga ukuba nesiphequluli se-inthanethi sesimanje njenge-Safari noma i-Google Chrome, futhi isofthiwe yokusebenza akufanele ibe ndala.
Ukuxhumana kwe-inthanethi okuzinzile nge-Wi-Fi noma idatha yeselula
Awudingi i-smartphone ebizayo yakamuva ukuze ukwazi ukudlala e-Spin247 casino. Ngisho ne-smartphone engabizi enezici ezivamile nokuhlelwa okulingene yanele ukuthi ukwazi ukudlala kahle futhi ube nesikhathi esimnandi. Udinga nje iselula esebenza ngesofthiwe yokusebenza esekelwayo futhi esekela isiphequluli se-HTML5 sanamuhla.
Emakhasino amaningi, akuyona yonke imidlalo eqoqweni esebenzayo kumadivayisi aphathekayo. Kodwa-ke, i-Spin247 inikeza ikhathalogi yemidlalo eyenziwe kusetshenziswa indlela yamaselula. Lokhu kusho ukuthi imidlalo iklanyelwe, yakhelwa futhi yahlolelwa amadivayisi eselula kuqala bese ilungiselwa ukusebenza kuma-PC njengama-desktop nama-laptop, esikhundleni sendlela ephambene nalena. Ngakho-ke, uzokwazi ukudlala iningi lemidlalo, noma yonke imidlalo enikezwayo e-Spin247 casino kudivayisi yakho yeselula. Kepha, eminye imidlalo isebenza kangcono kuselula kuneminye. Eminye imidlalo esingayincoma kubadlali abasebenzisa iselula yilena –
Ngingayidawuniloda Yini i-Spin247 Casino Kuselula Yami?
I-Spin247 Casino iyikhasino ye-inthanethi esebenza kahle kuselula, ngakho-ke vele uye kuwebhusayithi ye-Spin247 ngedivayisi yakho yeselula bese uyadlala. I-Spin247 ayinayo i-app ye-iOS noma ye-Android ongayidawuniloda kuselula yakho.
Ngakho-ke, impendulo ingucha – awukwazi ukudawuniloda i-Spin247 casino kuselula yakho. Ayikho indlela yokuyidawuniloda etholakalayo.
Izindlela Ezivunyelwe Zokukhipha Imali e-Spin247 Casino
Wire Transfer Yebo Izinsuku zokusebenza 5 – 7
Visa Yebo Izinsuku 2-4
MasterCard Yebo Izinsuku 2-4
Interac Yebo Izinsuku zokusebenza 5 – 7
EasyEFT Yebo Izinsuku zokusebenza 3 – 5
iDebit Cha NA
Pay by phone bill Cha NA
Instadebit Cha NA
Izindlela Ezivunyelwe Zokudiphozitha Imali e-Spin247 Casino
Spin247 Casino Imininingwane Evamile
Imininingwane Evamile Yekhasino
Umphathi ngu: Fairdos Online Services Limited I-imeyili: [email protected]
Uhlobo Olungadingi Ukudawunilodwa: Yebo Iwebhusayithi: https://www.Spin247.com/
Ubuhle Nobubi be-Spin247 Casino
Isekela izilimi nezinhlobo eziningi ezahlukene zemali
Iyamukela abadlali abavela kuwo wonke umhlaba kodwa yenqaba amazwe ambalwa
Igxile kumakethe yaseNingizimu Afrika
AmaRandi aseNingizimu Afrika ayasebenza
Ibhonasi yokukwamukela enomvuzo
Ipulatifomu yeselula isezingeni eliphezulu
Ama-slot ahlukile ongeke uwathole kwenye indawo
Alukho usizo olutholakala ngocingo
Izindlela zokukhipha imali zimbalwa
Imidlalo yasetafuleni neyasekhasino ongayikhetha imbalwa
Yini Eyenza Ukuthi i-Spin247 Casino Ikhethwe Kakhulu Ngabadlali baseNingizimu Afrika?
I-Spin247 yikhasino ye-inthanethi yesimanje futhi ilethwa kuwe ngu-opharetha owaziwayo. I-Spin247 casino isekela abadlali abavela ezifundeni ezahlukahlukene nasemazweni omhlaba, kepha ukugxila kwabo kusezimakethe zaseNingizimu Afrika. Lokhu kubonakala ekutheni abadlali bakuleli banezici eziningi abazisebenzisayo.
Abadlali baseNingizimu Afrika bamukelekile ukubhalisa uma umdlali eneminyaka engaphezu kwengu-18 ubudala
Bayakujabulela ukufinyelela kulo lonke uhlu lwamaphromoshini namabhonasi atholakalayo
AmaRandi aseNingizimu Afrika asekelwa ekuqaleni ukudiphozitha nokukhipa imali
Yonke imigomo nemibandela yamaphromoshini icacisa amanani ngamarandi nangezinye izinhlobo zemali
Iqoqo eliyingqayizivele lama-slot elivela kunjiniyela wemidlalo ozimele
Izinkokhelo nokukhipha imali okuvikelekile
Njengoba ziningi izinzuzo abadlali baseNingizimu Afrika abazithokozelayo e-Spin247 casino, le khasino ye-inthanethi isendleleni esheshayo yokuba yintandokazi phakathi kwabadlali be-inthanethi baseNingizimu Afrika.
Izikhalo nge-Spin247 Casino Ningizimu Afrika
Njengoba i-Spin247 iyikhasino ye-inthanethi esisebenze izinyanga ezimbalwa kuphela, asikwazi ukufakazela ukuthi ithembeke kangakanani ngoba isazobhekana nokuvivinywa kwangempela ngokudlula kwesikhathi. Nokho, uma sibheka intshiseko kuze kube manje, izimpawu zokuqala ziyakhuthaza futhi awekho amafulegi abomvu angasikhathaza ngobunyoninco, ukulunga nokuvikeleka kwale pulatifomu yekhasino ye-inthanethi.
Kuyacaca ukuthi i-Spin247 casino ikhethe ukwenza ibhizinisi nomakhi ongcono kakhulu womdlalo nezindlela zokukhokha ku-inthanethi ezithembekile. Ngaphezu kwalokho, inelayisense esemthethweni ekhishwe yikhomishini yokugembula ku-inthanethi eyaziwayo. Lezi zinto zihamba ibanga elide ekwenzeni ukuthin ibe yikasino enhle enikeza abasebenzisi isipiliyoni esihle.
Ezinyangeni ezimbalwa isebenza, bekungakabibikho zikhalo ezibhalisiwe ngale khasino. Kepha, uma noma yiziphi izikhalo zingavela, ungaqiniseka ukubona lesi sigaba sibuyekezwa ngokufanele.
Ingabe i-Spin247 Casino Isemthethweni eNingizimu Afrika?
Ngokwezincwadi zomthetho zaseNingizimu Afrika, amakhasino e-inthanethi avinjelwe eNingizimu Afrika. Noma kunjalo, kukhona okuthile lapha. Uma ikhasino ye-inthanethi ingasebenzeli eNingizimu Afrika, ikhasino ye-inthanethi inganikela ngamaseveisi ayo kubadlali baseNingizimu Afrika.
Imithetho yaseNingizimu Afrika isebenza ngaphakathi kwemingcele yaseNingizimu Afrika ngakho-ke ayisebenzi kumakhasino e-inthanethi angaphesheya kolwandle. I-Spin247 casino isebenzela ngaphesheya kolwandle futhi yingakho abadlali abavela eNingizimu Afrika bengadlala kule khasino ye-inthanethi ngaphandle kokukhathazeka ngokungena enkingeni nomthetho.
Ngiyikhipha Kanjani Imali ku-Spin247 Casino?
Kunezinto ezimbalwa okudingeka uziqinisekise ngaphambi kokucela ukukhipha imali, yilezi –
Qinisekisa ukuthi i-akhawunti yakho ye-Spin247 yemali inebhalansi futhi inani lebhalansi lilingana noma likhulu kunomkhawulo omncane ovunyelwe wokukhipha imali.
• Qinisekisa ukuthi awunayo imali yebhonasi enezidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali ezingafezwanga.
Ukukhipha imali e-Spin247 Casino kulula –
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho usebenzisa imininingwane yakho
• Yiya esigabeni sokukhipha imali bese ukhetha indlela oyithandayo yokukhipha imali
• Bhala ukuthi ufuna ukukhipha imali engakanani bese uqinisekisa.
Qaphela – Ngaphambili kokuthi ukwazi ukukhipha imali okokuqala, kuyadingeka futhi kuphoqelekile ukuthi uqede izinqubo zakho zokuqinisekisa ze-KYC. Uma ucela ukukhipha imali ungakaqedi ukuqinisekiswa kwe-KYC, ikhasino ingabamba imali yakho futhi icubungule ukukhipha imali i-KYC yakho isiqediwe. Ukuqedela inqubo yokuqinisekisa ye-KYC, ungacelwa ukuthi unikeze incwadi kamazisi ekhishwe nguhulumeni njengelayisense yokushayela, izindleko zikamasipala, njll.
Yini i-Spin247 Casino?
I-Spin247 Casino iyikhasino ye-inthanethi esungulwe ngo-2020 futhi inelayisense yokusebenzisa ekhishwe nguHulumeni waseCuracao. I-Spin247 casino yabamukela abadlali abavela ezingxenyeni eziningi zomhlaba futhi iNingizimu Afrika ingelinye lamazwe anjalo.
E-Spin247 casino, ungazivulela i-akhawunti futhi udlale imidlalo yasekhasino enjengengama-slot, ama-jackpot nemidlalo yasetafuleni ngemali yangempela usebenzisa izindlela zokubhenka eziphephile.
Ngubani umnikazi we-Spin247 Casino?
I-Spin247 iphethwe yi-Fairdos Online Services Limited, inkampane ebhaliswe e-Cyprus, enenombolo yokubhalisa ethi Reg No. C387234. Inelayisense yokuqhuba imisebenzi yemidlalo ku-inthanethi kaHulumeni waseCuracao ngaphansi kwelayisense 365 /jAZ, sub-license GLH-OCCHKTW0707192018
Iphephe kangakanani i -Spin247 Casino?
I-Spin247 iyikhasino ye-inthanethi ephephile futhi nanka amanye amaphuzu okufanele uwaqaphele uma kukhulunywa ngokuphepha e-Spin247 casino.
• Yibhizinisi elisemthethweni eliku-inthanethi eligunyazwe nguHulumeni waseCuracao
• U-opharetha uyaziwa
• I-Spin247 casino iye yashicilela nenombolo yelayisense kuwebhusayithi uqobo
• Isebenzisana ne-begambleaware.org futhi iyazi ngokugembula okufanele
• Ikhasino isebenzisa ubuchwepheshe be-SSL ukuvikela idatha
• I-Spin247 inikeza izindlela zokukhokha ku-inthanethi ezithembekile